Galmada Ii Feed ma ahane waa dareen (Tilmaam wanaag) | shumis.net
Home » galmada » Galmada Ii Feed ma ahane waa dareen (Tilmaam wanaag)
Galmada Ii Feed ma ahane waa dareen (Tilmaam wanaag)
Sida aanu Ognahay Galmada Sharciga ah ee ay wadaagayaan Ninka iyo Naagtiisa ee la jideeyay ayaa xiliyada ay gogol wadaaga yihiin waxaa la ogaaday in ay ugu macaantahay tan Sariirta korkeeda la’isugu Marxabeeyo.
Marka Ninka iyo Naagtiisa ay Gogosha wadaagayaan ayaa dadka qaar wexey sameeyaan qaab dareen la’aan camal ah oo laga yaabo ama Ninka ama Naagta in ay raaxada dareemaan kaliya Marka ay Biyaha ka imaanayaan Taasina waxaa ka fiican in Jirkaaga oo idil uu raaxada dareemo Xiliga Gogol wadaaga.
Gabdhaha Qaar waxaa la sheegaa in iyaga oo Ninkooda La Raaxeysanaya ay hadana iska Maahsanyihiin/ Qalbi maqanyihiin oo aynaan Raaxadaba dareen gooni ah ku heynin taasina wexey keeneysaa in Ninka uusan naagtiisa ku Qancin.
Sidoo kale Ragga iyaguna aan Raaxada aqoon ee arintoodu tahay ( Ii Feyd ) ayaa waxaa dhib ku qaba Xaasaskooda.
Hadaba Rag iyo dumarow iska ilaaliya in Nolosha Gurigiina aad si Half/Bar ah ku wada noolaataan.
Title: Galmada Ii Feed ma ahane waa dareen (Tilmaam wanaag)